कस्तो छ त हेर्नुहोस् तपाईको आज (मंगलबार) को राशिफल ? « Sansar News
२३ असार २०७७, मंगलवार ०७:०८
लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको काम सम्पादन हुनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन सकिनेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । व्यापारतर्फ पनि दिगो फाइदाको काम बन्नेछ । कीर्तिमानी काम बन्नाले मूल्यवान् वस्तु लाभ हुन सक्छ । साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ र आँटेको काममा उत्साहित भइनेछ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ ।
स्वास्थ्य कमजोर रहनाले काममा बाधा पर्नेछ । मिहिनेत अनुसारको उपलब्धि तत्काल प्राप्त नहुन सक्छ । सहयोगको तत्परता देखाउनेहरू पछि हट्नेछन् । काम थाल्न समय लागे पनि सम्भावना खोजी गर्ने समय छ । आजको मिहिनेतले भविष्यमा भने उपलब्धि प्राप्त हुनेछ । धार्मिक मनोवृत्ति बढ्नेछ । सामाजिक काममा अवसर पाइनेछ । शुभचिन्तकहरूले काममा साथ दिनेछन् ।
सानातिना काम र घरेलु समस्यामा अलमलिनुपर्ने देखिन्छ । गरेका कामबाट तत्काल फाइदा उठाउन मुस्किलै पर्नेछ । अवसर प्राप्त भए पनि ठूलो उपलब्धि हातलागी नहुन सक्छ । अर्थ अभाव रहनाले नयाँ काममा जुट्न नसकिएला । गरी आएको कामलाई भने निरन्तरता दिन सकिनेछ। आश्वासन दिनेहरूले झुक्याउन सक्छन् । स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला ।
आराम तथा मनोरञ्जनको समय छ । प्रियजनसँग दिन रमाइलो गरी बित्नेछ । भौतिक साधनले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ । अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ । व्यापार र पेसामा पनि फाइदै हुनेछ। लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ । पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ । विशेष उपहार प्राप्त हुन सक्छ ।
साहसी काम गरेर अरूको मन जित्न सकिनेछ । प्रतिपक्षीहरू समेत सहयोगी बन्नेछन् । कामको उच्च मूल्यांकन हुनेछ भने लगनशीलताले विभिन्न अवसर दिलाउन सक्छ । रोकिएका काम बन्नुका साथै नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ । व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । व्यापारमा पनि प्रशस्त फाइदा हुनेछ । मेहनत गर्दा जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ ।
परिस्थितिवश चिताएको काममा विलम्ब हुनेछ । अवसरले पछ्याए पनि फाइदा उठाउन चुनौतीसँग जुध्नुपर्नेछ । स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सजग रहनुपर्ला । अध्ययनमा समय दिन नसक्दा पछि परिने सम्भावना छ । लगनशीलताले मात्र परिस्थितिलाई बदल्न सक्छ । शुभचिन्तकहरूले राम्रो साथ दिनेछन् । अरूका विषयमा चासो लिने बानीले व्यर्थैमा झमेला बेहोर्नुपर्ला ।
नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । मिहिनेतले दिगो फाइदा दिलाउनेछ । प्रतिस्पर्धीले हार खानेछन् । परिश्रम परे पनि समय निकै फलदायी रहनेछ । सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् । रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । उद्योग र व्यापारमा पनि विशेष फाइदा हुनेछ । मिहिनेतले दिगो फाइदा दिलाउनेछ भने गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ ।
बोलीको गलत अर्थ लाग्ने र मान–सम्मानमा आघात पुग्नेछ । विचार सम्प्रेषण गर्नुअघि राम्ररी विचार पुर्याउनुहोला। वादविवादले अधिकार कटौती गराउने हुँदा उपलब्धिका लागि समय प्रतीक्षा गर्नुहोला । सोखले खर्च बढाउनेछ भने काममा पनि केही उल्झन आउन सक्छ । प्रयत्न गर्दा अध्ययनमा प्रगति गर्न सकिनेछ । बोलीको प्रभावले चिताएको काम सम्पादन हुनेछ ।
बिछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ । सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् । सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ। नयाँ काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । स्वादिष्ट भोजन र मनोरञ्जनमा समय बित्नेछ । पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ । तर आफ्नो स्वामित्वका वस्तुमा अरूले दाबी गर्न सक्छन् । बेसुरमा वचन दिने बानीले पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
छर–छिमेकमा असमझदारी बढ्ने समय भएकाले होसियारीसाथ काम लिनुहोला । खर्च बढ्नाले अर्थ अभाव देखापर्न सक्छ । आफ्नाबाटै टाढिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । अवसरका लागि निकै दौडधुप गर्नुपर्ला । समय दिन नसक्दा बन्न लागेको काम बिग्रन सक्छ । समयमा होस नपुग्नाले व्यवहारमा पछि परिएला । टाढाको यात्रा गर्ने प्रक्रिया भने अघि बढ्ने समय छ ।
वि.सं. २०७७ असार २३ मंगलवार (इ.स. २०२० जुलाई ७)